कपाल नबढेर चिन्तित हुनुहुन्छ ? यस्ता उपाय अपनाउनुहोस। - ramechhapkhabar.com – ramechhapkhabar.com
कपाल नबढेर चिन्तित हुनुहुन्छ ? यस्ता उपाय अपनाउनुहोस।
सबै महिलाहरूलाई आफ्नो कपाल लामो र सुन्दर बनाउन मन पर्छ । तर चाहेर पनि बनाउन सकिरहेका हुँदैनौ । हामीले आफ्नो शरीरमा जुन चिज प्रयोग गर्छौ उसको प्रभाव हाम्रो कपालमा पनि पर्न सक्छ ।
कपाल राम्रो गराउनु भन्दा पनि पहिला झर्न रोक्नु पर्छ । कपाल निकै कम मात्रामा बढ्ने वा बढ्दै नबढ्ने समस्याका कारण धेरै हुन सक्छन् । जसमध्ये प्रदूषण, अस्वस्थ जीवनशैली, खाना सम्बन्धित नराम्रो बानी र शारीरिक गतिविधि आदि हुन सक्छ ।
आलुको प्रयोगबाट कपाल लामो बनाउने उपाय
हिजोआज अधिकांश महिलालाई कपालसँग सम्बन्धित समस्याले सताएको हुन्छ । धेरैजसोमा कपाल झर्ने समस्या हुन्छ भने कतिलाई कपाल लामो नहुने समस्याले पिरोलेको हुन्छ । कपाल निकै कम मात्रामा बढ्ने वा बढ्दै नबढ्ने समस्याका कारण धेरै हुन सक्छन् । जसमध्ये प्रदूषण, अस्वस्थ जीवनशैली, खाना सम्बन्धित नराम्रो बानी र शारीरिक गतिविधि आदि हुन सक्छ । त्यसैले, कपाल बढेन भनेर आत्तिनुपर्ने पर्दैन । केही सरल घरेलु उपाय अपनाएर कपाललाई लामो र स्वस्थ बनाउन सकिन्छ ।
कपाल बढाउन आलुको रस
कपालको लागि ताजा आलुको रस तयार पार्नुभन्दा पहिले एउटा आलुको बोक्रा तास्नुपर्छ । त्यसपछि आलुलाई मसिनो टुक्रामा काटी ब्लेन्डरमा मिक्स गर्नुपर्छ । यसरी तयार भएको पेस्ट अलि बाक्लो भयो भने त्यसमा पानी पनि मिसाउन सकिन्छ । आलुको रस र आलुको टुक्रालाई छुट्याउन मलमलको कपडामा राखेर छान्नुपर्छ । यसरी छानेर आएको रसलाई कपालमा लगाउन सकिन्छ । तर होस गर्नुपर्ने कुरा के हो भने हरेक पटक प्रयोग गर्न आलुको ताजा रस नै चाहिन्छ ।
आलुको रस लगाउने तरिका
कपाललाई लामो र बाक्लो बनाउन आलुको रसलाई विस्तारै कपालको जरासम्म पुर्‍याउन मालिस गर्दै लगाउने र बचेको रसलाई कपालमा लगाउनु पर्छ । त्यसपछि सावर क्यापले कपाल छोप्नुपर्छ । २० देखि २५ मिनेटपछि कपाललाई सफा पानीले धुनुपर्छ । कपाल लामो बनाउन यो प्रक्रियालाई सातामा एक पटक गर्नु आवश्यक हुन्छ । यस प्रक्रियाले कपाललाई बढाउनुका साथै चमकदार पनि बनाउँछ । यो उपाय अपनाउँदा कपालमा प्याज लगाए जस्तो नराम्रो गन्ध पनि आउँदैन । त्यसका लागि सफा पानिले राम्ररी धुनुपर्छ ।
आलुको रस, मह र अन्डाको मास्क
आलुको रसको प्रयोगले हेयर मास्क पनि बनाउन सकिन्छ । यसका लागि आलुको रसमा थोरै मह र अन्डा मिसाएर बनाउन सकिन्छ । यस प्याकले कपालको जरामा मसाज गर्नु पर्छ । यसोगर्दा कपालको जरामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । किनभने यसले जरालाई सक्रिय बनाई कपालको वृद्धिमा मद्दत पुर्‍याउँछ । यस मास्कलाई कमसेकम ३० मिनेटसम्म कपालमा राखेर राम्रोसँग पखाल्नुपर्छ । यो कपाल बढाउने प्राकृतिक तरिका भएकाले यसले कपाललाई कुनै नराम्रो असर गर्दैन । कपाललाई आवश्यक पर्ने चिसोपना प्रदान गर्ने हुनाले जरासम्म पोषण प्रदान गर्न यस मास्कले मद्दत गर्छ ।
आलुको रसको फाइदा
:यसले कपाल वृद्धि हुन सहयोग पुर्‍याउँछ ।
:कपालमा चमक ल्याउन आलुको रसले मदत गर्छ ।
:मह र अन्डा मिसाएर लगाउँदा यसले कपालमा राम्रो कन्डिसनर काम गर्छ ।
:कपालको जरालाई सफा राख्छ ।
:जरा स्वस्थ बनाउन पनि आलुको रसले सहयोग गर्छ ।
एन्टी ड्यानड्रफ स्याम्पुको प्रयोग
कपाल लामो बनाउन आलुको रसले सहयोग गर्छ । तर कपाल झर्नबाट रोकी बाक्लो र चम्किलो बनाउन एन्टी ड्यानड्रफ स्याम्पु प्रयोग गर्नु जरुरी हुन्छ । किनभने कपाल झर्नुको मुख्य कारण चाया पनि हो । एन्टी ड्यानड्रफ स्याम्पु प्रयोग गर्नु अगाडि सामान्य स्याम्पुले नुहाएर कपालको धुलो मैलोलाई निखार्नु पर्छ । त्यसपछि एन्टी ड्यानड्रफ स्याम्पु लिएर त्यसलाई मजाले कपालमा लगाएर करिब पाँच मिनेट जति त्यत्तिकै राख्नुपर्छ । एन्टी ड्यानड्रफ स्याम्पुमा भएको रसायनले चायाको कीटाणुलाई मार्न मद्दत पुर्‍याउँछ । त्यसपछि सफा पानीले कपाल पखाल्नुपर्छ । यस प्रक्रियालाई नियमित गर्नाले चाया कम भएर कपाल झर्न रोकिन्छ । एजेन्सी